पर्यटकको प्रतिक्षामा प्रदेश संग्रहालय | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार पर्यटकको प्रतिक्षामा प्रदेश संग्रहालय
चैत १०,पोखरा । पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वको गण्डकी प्रदेश संग्रहालयले प्रचारप्रसार र आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । पोखरा महानगरपालिका ९ स्थित सो संग्रहालयमा एक सय वर्ष पुराना भाँडाकुँडा, गरगहना, घरायसी सामग्री, विभिन्न जातजातिका वेशभूषा एवम् गरगहना छन् ।
मुस्ताङ ग्यालरी नामकरण गरी सो क्षेत्रमा उत्खनन् गरिएका पुरातात्विक महत्वका सामग्रीसमेत प्रदर्शनी कक्षमा राखिएको छ । वि.सं. २०४१ मा स्थापित तत्कालीन क्षेत्रीय संग्रहालय २०७५ भदौ २४ गते सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनको उपस्थितिमा प्रदेश संग्रहालय नामकरण गरिएको हो । २३ रोपनी जग्गामा फैलिएको सो संग्रहालयमा हाल ७ कर्मचारी छन् । संग्रहालयको महत्व उजागार हुन नसक्दा यसबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिएको कर्मचारीको भनाइ छ ।
संग्रहालय अवलोकन गर्न आउने पर्यटक बढ्न नसक्नुमा प्रचारप्रसार र आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेकोे संग्रहालयका सूचना अधिकारी कवीन्द्रराज पौडेल बताए । ‘संग्रहालयमा अझै पनि परम्परागत रुपमै प्रदर्शनी कक्ष रहेका छन् ,आधुनिक संग्रहालयको अवधारणाबाट अगाडि बढ्न सकेका छैनौं’, उनले भने । संग्रहालयभित्र ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका वस्तु रहेकाले आधुनिक प्रदर्शनी कक्षसहित प्रचारप्रसारको गर्न सके पर्यटकको आवागमन बढ्ने सक्ने उनको विश्वास छ ।
संग्रहालयका लागि टिकट घर, व्यवस्थित बगैंचा, द्वार र कार्यालय भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग रू.१ करोड माग गरिए पनि पाउन नसकिएको संग्रहालयका सहलेखापाल शोभाखर ढकालले बताए । गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा आएपछि कर्मचारीले ३ महिनादेखि तलब समेत नपाएको ढकालले बताए । उनले भने, ‘शुरुमा संघले हेर्ने कि प्रदेशले हेर्ने भन्ने विषयमा नै अलमल देखियो ।
असारको अन्त्यतिर मात्रै संघीय सरकारले प्रदेश सरकार मातहत राख्ने निर्णय गर्‍यो, त्यतिबेलासम्म प्रदेश सरकारले बजेट बनाइसकेको थियो । संग्रहालयको लागि रकम छुट्याउन ढिला भएकोले पनि यो अन्योल देखिएको हो ।’ उनका अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको रकमबाट कर्मचारीले मङ्सिरसम्मको तलब पाएका छन् । ‘करारका ३ कर्मचारीले तलब लिएका छन् तर अरुले पाएका छैनन’, ढकालले भने । संघीय संरचनाका अभ्यासले पनि जटिलता देखिएकाले ढिला भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
संग्रहालयको आम्दानी वार्षिक सटर भाडाबाट रू.१३ लाख र संग्रहालय अवलोकन गर्न आएका पर्यटकको टिकटबाट रू. २ लाख गरी कूल रू.१५ लाख छ तर खर्च वार्षिक झण्डै रू. २२ लाख छ । वार्षिक रू. ७ लाख घाटा छ । टिकट दरसमेत एकदम न्यून रहेको ढकाल बताउंछन् । नेपालीलाई रू.१० र विद्यार्थी सहुलियत रू. ५, सार्क देशका पर्यटकलाई रू. ५० र अन्य विदेशीलाई रू. १०० सय टिकट दर रहेको छ । दैनिकजसो ५० देखि १०० जना संग्रहालय अवलोकलनका लागि आउने गरेको बताइएको छ । संग्रहालय घुम्न आउने पर्यटकलाई लक्ष्य गरेर शनिबार खुला गरिएको छ भने मंगलबार बन्द हुने गर्छ । रासस